Homeसमाचारविनयजंग प’क्राउ पर्दै, सपनाले दिइन् प्रहरी चौकीमा उजुरी, विनयजंग फ’रार (भिडियो सहित)
February 14, 2021 admin समाचार 6079
वेवारिसे शव ब्यवस्थापनका का’रण नाम कमाएका विनयजग बस्नेतले आफैले छोरी मानेकी १७ वर्षकी किशोरी सपना रोका मगरको नां’ गो तस्बिर आफुसंग मोवाइलमा छ भन्दै खुले’आम युट्युवमा स्वीकार गरेका छन् ।
उनले सपनालाई आफुले नै अहिले सम्मको अवस्थामा ल्याएको भन्दै अरुले नै सपनालाई उक्सा&एर आफु विरु’द्ध बोल्न लगाएको आ’रोप लगाएका छन् । उनले सिमित युट्युवरहरुले सपनालाई घेरा’बन्दी गरेर आफु विरुद्ध सपनालाई बोल्न उक्साएको आ’रोप लगाएका छन् ।
अरुको उक्साहटमा लागेर सपना आफ्ना विरु’द्ध लागे सबैलाई ठेगान लगाउने चे’तावनी पनि उनले दिएका छन् । उनले सपनाको अ ‘श्लि ल तस्बिर आफ्नो मोवाइलमा र पेन ड्राइभमा पनि सुर’क्षित राखेको स्वीकार गरेका छन् । आफुले छोरी मानेकी सपनाका त्यस्ता नराम्रा तस्बिर उनले सुरक्षित राख्नुको कार’ण भने उनले बताएनन् ।
म र्ता क्या नहि कर्ता ? उनले चेता’वनी दिँदै भनेका छन् यदि मलाई कसैले धावा बोल्छ भने सबैलाई सि ‘ध्या इ दिन्छु । उनले गोल्डन टिभी चलाउने युट्युवरले सपनालाई घे’राबन्दी गरेर आफु विरुद्ध उक्साएको आरोप लगाएका छन् । उनले आफुलाई सपनाको वे ‘इ ज्जत गर्न पनि पछि नपर्ने चे’तावनी दिएका छन् । सामाजिक काम गर्न अव’रोध गर्ने कसैलाई पनि म छोड्दिन । चाहे त्यो सपना रोका मगर नै किन नहोस् मैले छो’ड्दीन उनले भने ।
उनले आफ्ना परिवारले समेत विश्वास नगरे’को बेलामा आफुले ल्याएर बीबीसीको शक्तिशाली महिला हुने अवस्था सम्म पुर्या’एको दा’वी गरेका छन् । उनले आफ्नै कारणले नै सपना त्यो अवस्थामा पुगेको उनको दा’वी छ ।
विनयले यस्ता अभिव्यक्ति दिएपछि प्रहरीले विनयजंग बस्नेतको खोजि गरिरहेको छ । सपना रोका मगरले उनीह’रुद्ध जाहेरी दिएपछि प्रहरीले पक्राउ गर्न खोजी सुरु गरेको हो । प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अशोक सिंहले उजुरु दर्ता भएपछि पक्राउ पुर्जीका लागि अ’दालतमा पुगेको बताए । पुर्जी जारी भएपनि बस्नेतलाई प’क्राउ गरिने उनले जानकारी दिए।
बस्नेतले युट्युव च्यानललाई दिएको अन्तरवार्तामा सपनाका नां’गा तस्वीर देखाइदिने ध’म्की दिएपछि बिबिसीको प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेकी १८ वर्षीया मगरले प्रहरीमा जा’हेरी दिएकी हुन् ।
सपनाले बस्नेतविरूद्ध अ’भद्र व्य’वहा’र’को मु’द्दा जा’हेरी दिएकी हुन् । उनका अनुसार बस्नेत अहिले काठमाडौं बाहिर छन्। प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको छ। यसअघि सपना र बस्नेतले मिलेर बे’वारिसे श’व ज’ला’उने काम थालेका थिए। – इताजा खबरबाट
हेरौ भिडियो सहित:
आज सुष्मा कार्कीको जन्मदिन, खोलिन् सलमान खानसँगको गो’प्य कुरा (हेर्नु’होस् भिडियो)
May 10, 2021 admin समाचार 5615
June 18, 2021 admin समाचार 4357
अभिनेता, टेलिभिजन प्र’स्तोता एवं लेखकका सुपरिचित बेलायती नागरिक ब्रायन ब्लेस्डले नेपालमा कोभिड रोकथाम र नियन्त्र’णमा सहयोग पुगोस् भनेर रकम सङ्कलन अ’भियान सुरु गरेका छन् । ‘जीवनको सबै’भन्दा गाह्रो चुनौती’का रूपमा उल्लेख गरिएको यो अभियानमा उनी
January 22, 2021 admin समाचार 6031
हजुरहरुलाई सुन्दा फिल्म अथवा म’नोगडन्ते हावा कुरा जस्तो लागेपनी बास्तबमै मोरङको बेलबारिमा कसैले सोच्नै नसकिने घ’टना घटेको छ । एकाएक सबै गाउँले बिरामी पर्दै आ’त्मा पसेर दुख दिन थालेपछि गाउँ नै चिन्तामा परेको छ ।
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (196985)